Golaha Imaamyada ee Waqooyiga Ameerika oo Tahniyada Ciidul Fitriga u diray Ummada Soomaaliyeed | Majliska.org
Golaha Isutaga Imaamyada ee Waqooyiga Maraykanka oo Tahniyada Ciidul Fidriga u diraya dhammaan ummada Muslimiinta, gaar ahaana Soomaalida meelkasta ay joogaan.
Golaha isutaga Imaamyada wuxuu udirayaa umada islaamka ah,gaar ahaan umada soomaaliyeed meel walbo oo ay joogaan Tahniyad ku aadan Ciidul Fitriga Sanadkan wuxuuna leeyahay ( Ciidukumul Mubaarak),Sanad walbana waxuu urajaynaynaa khayr iyo barwaaqo dhamaan umada islaamka ah.
Intaa kadib Goluhu wuxuu u dar daar mayaa Umada islaamka ah gaar ahaan Soomaalida;
	In laxoojiyo ku xirnaanta illaahay,lana wanaajiyo xiriirka Rabi,sidii la ahaa bisha ramadaan in la sii wado oo aanan cibaadadkii halkaa looga harin.
	In Illaahay loo toobad keeno,cafisna rabi la waydiisto,si guudna la isu cafiyo.
	In laga waan toobo cudurada na baabi’iyay aduun iyo aakhirana na seejiyay oo ay kamid yihiin Qabyaalada,Xaasidnimmada,Dhaca iyo Boobka IWM.
	Goluhu Sigaar ah wuxuu ugu dar daarmayaa Jaaliyada Soomaaliyeed eek u nool Qurbaha inay ku dadaalaan isku duubnaanta,kana fogaadaan waxyaabaha dhaawacaayo midnimadooda,iyo danta guud ee jaliyada.
	Goluhu wuxuu sidoo kale si gaar ah ugu dar daarmayaa jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool qurbaha inay ku xirnaadaan Masaajida iyo Maraakista Islaamiga ah ee ku yaalo Qurbaha,si ay uga bad baadaan dhaqamada xun xun ee loogu yimid wadamadaan qurbaha ah.
	Goluhu wuxuu u dar daar mayaa dhalinyarada soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dhalinyarada ku nool qurbaha,inay ka fogaadaan fikradaha qaloocan ee loo ekaysiiinaayo diinta islaamka,laguna halaagaayo diinta iyo naftaba,fikradahaas oo aan sal ku lahayn diinta islaamka.
Sheikh Abdullaahi Abul Fadli, Minneapolis